हुन्डाईको बहुप्रतीक्षित ‘भेन्यु’ कार आइपुग्यो, सुरुवाती मूल्य साढे ६ लाख – Mix Khabar
हुन्डाईको भेन्यु कार भारतमा सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीको बहुप्रतीक्षित र पहिलो सब कम्प्याक्ट एसयूभी भेन्यु भारतीय बजारमा सार्वजनिक भएको हो। यसले अन्य एसयूभीलाई चुनौती दिने विश्वास गरिएको छ। भारतमा चार भेरिएन्ट ई, एस, एसएक्स र एसएक्स(०)मा कार उपलब्ध रहेको छ।
यो गाडी भारतमा कम्पनीको पहिलो गाडी हो। भारतमा कम्पनीले पहिलो कनेक्टेड एसयूभी नामबाट गाडी सार्वजनिक गरेको हो। बोल्ड डिजाइनयुक्त यो गाडी हेर्दा क्रेटाजस्तै छ। थर अगाडि र पछाडिबाट हेर्दा भने फरक रहेको छ।
यसमा क्यासकेडिङ ग्रिल, स्प्लिट हेडल्याम्प, प्रोजेक्टर फग ल्याम्प, एलईडी टेल ल्याम्प, १६ इन्चको डायमन्ड अलोय ह्विल रहेको छ। त्यस्तै साइडमा रहेको स्ट्रंग लाइन्सले यसलाई स्पोर्टी बनाएको छ।
प्रिमियम लेजरवाला फिनिस ड्यासबोर्ड र फेब्रिक लेदर फिनिस सिट कारमा रहेको छ। गाडीको सिट आर्म रेस्टसहितको स्लाइडिङ र कप होल्डरयुक्त रहेको छ। त्यस्तै गाडीको बुट स्पेस ३ सय ५० लिटरको छ भने यो गाडी १० स्वरुपमा उपलब्ध छ।
अहिलेलाई यो गाडी तीन इन्जिन अप्सनमा बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ। जसमा एउटा १.२ लिटरको पेट्रोल इन्जिन रहेको छ। यसको ८२ बीएचपीको पावर तथा ११४ एनएमको टर्क क्षमता रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो १.४ लिटर डिजल इन्जिनको छ, जुन ८९ बीएचपीको पावर तथा २२० एनएमको टर्क क्षमतायुक्त छ भने तेस्रो १.० लिटर टर्बोचाज्र्ड इन्जिनयुक्त रहेको छ। यसको ११८ बीएचपीको पावर र १७२ एनएम पिक टर्क क्षमता छ।
१.२ लिटर पेट्रोलतर्फ ५ स्पिड म्यानुअल र १.४ लिटर डिजेलतर्फ ६ स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसनयुक्त रहेको छ। त्यस्तै १.० लिटर टर्बोचाज्र्ड पेट्रोल इन्जिनसँगै ६ स्पिड म्यानुअल र ७ स्पिड डुअल क्लच ट्रान्समिसनको अप्सन दिइएको छ।भारतमा कारको सुरुवाती मूल्य साढे ६ लाख भारु पर्ने बताइएको छ।
Posted on: Tuesday, May 21, 2019 Time: 23:41:17
खुशिको खबर : अब बजाजपछि टिभिएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटल नेपालमै बन्ने
फेरी ह्वातै घट्यो सुनको मुल्य , हेर्नुहोस् तोलामा कति पुग्यो ?
बिदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कुन देशको बिनिमय दर कति ?